Kudbadihii Murashixiinta u tartamaya Xilka Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle oo soo gabagabowday – Radio Muqdisho
Kudbadihii Murashixiinta u tartamaya Xilka Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle oo soo gabagabowday
Magaalada Jowhar ee Xurunta dowladd goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa hada ku soo gabagabowday dhageeysiga Khudbadihii ay Musharxiinta Madaxtinimo ee Hirshabelle u jeedinayeen Baarlamaanka Maamulkaasi.
Hoolka ay ka socotay Khudbadaha waxaa ku suganaa Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya, Guddoonka Baarlamaanka Maamulka Hirshabelle, Musharixiita u taagan Doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku-xigeenka iyo marti sharaf kala duwan.
Musharaxiinta u Tartamaya in ay qabtaan xilka Madaxweynaha Maamulka Hirshabelle ayaa ah Saddex Musharax oo kala ah Maxamed Cabdi Waare ,Cali Cabdulaahi Cosoble iyo Cali Maxamed Carraale,
Sidoo kale waxaa xilka Madaxweyne ku-xigeenka u taagan Hirshabelle waa labo Musharax oo kala ah Cali Cabdulaahi Guudlaawe iyo Musharax Cali Xasan Taakow.
Maalinta Bari ah ayaa lagu wadaa in la guda galo Doorashada Madaxweynaha dowlad Goballeedka Hirshabeelle iyo Madaweyne ku-xigeenka Maamulkaasi.
Marwada Madaxweynaha Dalka oo xaflad sagootin ah u qabatay Afhayeenkii Madaxtooyada “SAWIRRO”